कारण र समाधान: को schoolchildren विनाशकारी व्यवहार
सन्तानको प्रतिकूल विकास कारण व्यक्तित्व को संरचना को निष्ठा उल्लङ्घन गर्ने विनाशकारी प्रक्रिया छ। यो सरल कि ज्ञात छ व्यक्तित्व संरचना , बौद्धिक भावनात्मक र व्यवहार क्षेत्रहरू: तीन घटक हुन्छन्। सबै तीन घटक को सुरिलो विकास मानव विकास सफलता सुनिश्चित गर्दछ। विनाशकारी व्यवहार आफ्नो गतिविधिहरु तिनीहरूलाई लागू गर्न आचरण वा अनिच्छा को नियम को अज्ञानता को एक परिणाम रूपमा विद्यार्थी मा देखा पर्न सक्छन्।
विद्यालयमा विनाशकारी व्यवहार को स्रोत:
1) वयस्क बच्चा इच्छा को पेश्की। को स्वतन्त्रता र पहल दबा, शिक्षक छोराछोरी, आफ्नो गतिविधि, संघर्ष परिणामस्वरूप को व्यक्तित्व विकास hinders। Deviant व्यवहार मनोविज्ञान destructiveness को सिद्धान्त मा आधारित छ जो, सख्त authoritarian शिक्षण शैली अन्तर्गत दमन र व्यक्तिगत को प्रतिरोध को परिणाम हो।
2) प्रशिक्षण प्रक्रियाको कार्यान्वयन, बच्चा को जीवन मा मात्र समस्याग्रस्त अवधि। यो दृष्टिकोण संग, वयस्क पहिले नै एउटा समस्या थियो गर्दा मात्र बच्चा गर्न सक्रिय ध्यान लाग्छ। तर बित्तिकै समस्या यसको महत्व गुमेको छ रूपमा, शिक्षक चासो विद्यार्थीलाई मा, लामो सबै राम्रो जान्छ रूपमा, केही चिन्ता गर्न भनेर विश्वास, क्षेत्र बेवास्ता गर्न उहाँलाई छोडेर हराउछ। विनाशकारी व्यवहार उहाँको व्यक्तित्व ध्यान चित्रकला को एक माध्यम बन्नेछ। शिक्षक involuntarily को झन् वयस्क जवाफ जसको लागि अपराध प्रतिबद्ध हुनेछ एक छात्र आफैलाई ध्यान आकर्षित गर्न रूपमा विकास पथ "समस्या" मा बच्चा गाइड।
3) स्कूल बच्चा को monopolization। दायित्व को स्थिति मा राखिएको एक बच्चा, यो स्कूल सेवा गर्न "बाध्य" छ। बच्चाहरु र आमाबाबुको ठूलो शिक्षा लोड ठूलो रोजगार, थकान, भौतिक र स्नायु अधिभार, बच्चाको शरीर र मन लागि बलियो छैन असह्य महसुस गर्न मदत गर्न सक्छ जब। को monopolization विरुद्ध विरोध, विनाशकारी व्यवहार रूपमा व्यक्त विद्यालयको स्थापना नियम विनाश उद्देश्य: tardiness, अनुपस्थिति, लुगा को रूप मा disturbances, आदि
Erich Fromm अनुसार, गुण रूपमा destructiveness को संकेत जनसंख्याको 10-15% मा आउँदैन। आफ्नो पुस्तक "मानव destructiveness को शारीरिक रचना" मा उहाँले यो गुण आक्रामक मानवजातिले छैन घृणा मान्छे मा उच्चारण जो विनाश लागि इच्छा रूपमा परिभाषित। तिनीहरूले अपराधीहरूलाई, rapists, arsonists युद्ध हो। लेखक अनुसार, बच्चाहरु विनाशकारी व्यवहार sublimated वा पुरानो अनावश्यक र निर्माण केहि नयाँ र राम्रो विनाश उद्देश्य एक रचनात्मक आक्रमण मा परिवर्तित गर्न सकिन्छ।
मनोविज्ञान deviant व्यवहार को बच्चाहरु को शिक्षा डिजाइन एक विनाशकारी व्यक्तिगत इच्छा को पुनर्निर्माण विधिहरू प्रदान गर्दछ:
1) भविष्य पेशा यसको आवेदन मा विनाशकारी नाडी को निर्देशन कारणले। wherein आक्रमण उपचार र रिकभरी लागि प्रयोग गरिन्छ यो, दन्त चिकित्सा, पशु चिकित्सा र सर्जरी र अन्य संरक्षित हुन सक्छ।
2) यस्तो सुटिङ, डार्ट्स, डिस्कस हालने, कुस्ती रूपमा खेल आफूलाई व्यक्त गर्न कारणले। आक्रामक impulses नष्ट छैन, र खेल उपलब्धिहरू निर्देशित छन्।
3) को कला कार्यहरूमा destructiveness को प्रतिबिम्ब को प्रक्रिया मा: युद्ध, कविता, चलचित्र, खेल लिपि बारे लेखेर चित्रहरू। destructiveness गर्न भित्री चाहनाको रचनात्मकता र संस्कृति को एक उत्पादन हुन्छ।
पूर्व-विद्यालय वा विद्यालय उमेर मा देखेको बच्चाहरु को विनाशकारी व्यवहार, छैन दमन को विधिहरू द्वारा निर्मूल गर्न सकिन्छ। सबैभन्दा प्रभावकारी तरिका - परिवर्तन र सामाजिक महत्वपूर्ण लक्ष्य लागि नाडी ऊर्जा निर्देशन।
तपाईं एक चतुर मानिस हुनुहुन्छ लाग्छ? यहाँ तपाईं हुँदैन कुराहरू सूची छ
एक सम्बन्धमा यो समझ संग?
विधि "सरल analogy ': वर्णन, आवेदन, व्याख्या
मनोविज्ञान मा व्यक्तित्व को अवधारणा
सफलता सडक: एक सफल व्यक्ति कसरी बन्न
सम्बन्ध पूर्ण soured छैन सम्म कसरी, डाह को छुटकारा प्राप्त गर्न?
उमेर पिरामिड: प्रकारको संरचना र प्रकारका प्रकारहरू
आफ्नो युवा र अब VIN डीजल
ERR_CONNECTION_RESET त्रुटि कोड (कम्पाउन्ड रिसेट) 101: गलती सरल तरिका कसरी सच्याउन
अंग्रेजी शब्दहरू कसरी सम्झना गर्न? कति चाँडो अंग्रेजी शब्द सिक्न? अंग्रेजी शब्द सिक्दै
Strugatsky भाइहरूको बच्चाहरु को ": विवादहरू र काम एक सारांश
के अभिव्यक्ति गर्छ "दूध संग scalded पानी मा झटका गर्न?"
दोस्रो दायित्व - यो के हो?
कूलर लाइटर को चुरोट देखि शक्ति झोला - एक आवश्यक सहयात्री
मान्छे तिनीहरूलाई विश्वास: भिडियो खेल बारेमा सबैभन्दा लोकप्रिय मिथक
Gafur Gulam: को कवि को जीवनी र काम